Muqdisho oo mar kale ay ka soo cusboonaadeen Weeraro toos ah oo lagu soo qaado Xarumaha Ciidanka. – Hornafrik Media Network
Muqdisho oo mar kale ay ka soo cusboonaadeen Weeraro toos ah oo lagu soo qaado Xarumaha Ciidanka.
By HornAfrik	 On Jul 5, 2017
Caawa Fiidkii ayaa lagu soo qaaday Weerar ku billowday Baasuukayaal Xarunta Wasaaradda Gaashaandhiga ee Muqdisho. Waxaana weerarkan uu socday qiyaastii 10 daqiiqo, sida ay Goobjoogayaal u xaqiijiyeen Hornafrik.
Qaar ka mida Dadka Deegaanka oo codsaday inaan Magacooda la shaacin ayaa sheegay inay arkayeen illaa iyo 10 Maleeshiyaad ah oo u soo gudbay dhinaca Dayniile weerarka kadib, kuwaas oo ay rumaysan yihiin inay ahaayeen Maleeshiyaadkii weerarkii gaystay.
Kooxda Alshabaab ayaa sheegatay inay Weerarkan iyadu fulisay, Waxayna War ay soo dhigeen Barta Internet-ka ay ku leeyihiin ay sidoo kale sheegteen in Bam Gacmeedyo ay ku weerareen Xamar Wayne.
Ma jiro Wax war ah oo ay Dawladda Somalia ka soo saartay arrintan.
Muqdisho ayaa horay looga suuliyay weeraradda noocan oo ay ugu dambaysay markii laga xoreeyay Magaaladda Muqdisho Kooxda Alshabaab, iyadoona ay horay Hay’adaha Ammaanka Dawladda Somalia ugu guulaysteen inaysan hawaysan Kooxda Alshabaab Weeraradda Noocan ah. hase yeeshee tani waxay ahayd Fariin ay ku muujiyeen Kooxdu inay awood u leeyihiin fulinta Weeraro aan la mid ahayn kuwa is miidaaminta ah oo ah Ku Dhufo oo ka dhaqaaq, kadibna ay Maleeshiyaadkooda dib ugu laabtaan halkii ay ka yimaadeen.
Alshabaab Sannadkii tagay waxaa loo aqoonsaday inay noqotay Kooxda ugu dhiig Daadinta badnayd Caalamka, Waxayna Kooxdan Bartilmaameedsadaa Shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa Dalalka Deriska ah.
Gobalka Banaadir oo markii ugu horaysay Matalaad ku yeeshay Shirka Amniga Qaranka ee Somalia.
Waqooyiga Kuuriya oo soo bandhigay gantaalo caalamka ku cusub